Boliiska Faransiiska oo toogtay nin - BBC Somali
Boliiska Faransiiska oo toogtay nin
Image caption Xuska weerarka Charlie Hebdo.
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande, ayaa balanqaaday shan kun oo dheeraad ah oo boliis in la qaadanayo si loo adkeeyo ammaanka Faransiiska, sanad kadib markii la weeraray xafiiska jaraa'id Charlie Hebdo ee sawir gacmeed soo saara.
Waqti yar kadib, boliiska Paris ayaa toogtay nin looga shakiyay inuu weerari rabo saldhig boliis. Boliiska ayaa keenay dadku xeeldheer waxyaabaha qarxa kadib markii ay arkeen waayaro ka soo jeeda ninka dharkiisa.
Masuuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ninka uu ku qayliyay "Allahu Akbar" banaanka saldhiga boliiska ee Goutte d'Or, ee u dhow Montmarte, halkaasoo boliiska uu ku toogtay.
Horaantii Mr Hollande ayaa ku dhiirigaliyay boliiska iyo ciidamada kale ee ammaanka inay wadaagaan sirta iyo inay xiriiriyaan shaqada.
Niman hubaysan ayaa ku dilay 17 qof xafiiska jaraa'idka Charlie Hebdo iyo tukaan Yuhuud leedahay.